List of Great YouTube Music Apps in Dhegayso YouTube la Screen Off
Marka dhagaysiga muusigga YouTube ku saabsan qalabka macruufka Android ama, waa dhaqan fiican ee ay mar walba sii shaashadda on tan iyo music ka joojin doonto, haddii aad demi shaashadda. Ma jirtaa xal u this degaan? Jawaabtu waa haa gabi ahaanba. Chine music YouTube yihiin hubka xaq u leedahay in aad naftaada la hubeeyo marka dhegaysiga muusikada YouTube. Inta badan barnaamijyadooda u ogolaan doonto in loo maqli karo asalka, sidaasay ahaan doontaa dhibaatana ma at dhan la screen off. Aan hubi 10-ada sare ee Android iyo macruufka siday u kala horreeyaan ee hoose.
Android YouTube Music Apps
macruufka YouTube Music Apps
YouTube Music Apps u Android
App YouTube hadda taageeraan jeeda music loo maqli karo hadda sida ay update cusub iyo tani waa war wanaagsan u caashaqi jiray music weyn YouTube.
# Labaad PVSTAR +
PVSTAR + kuu ogolaanaya in loo maqli karo asalka iyo loo maqli celiyaan. Xitaa in aad abuuri karaan playlist u experience.It fiican ku faantaa 6 million downloads ilaa hadda.
# 3. Xorreeyay YouTube Player
Background loo maqli karo waxaa lagu dejiyaa FREEdi YouTube Player, kaas oo awood kuu inay dalka baadhaan oo ciyaaro YouTube video iyo playlist.
# 4. NextVid
NextVid u ogolaanaya soo jeeda oo ku celiyaan loo maqli karo, waayo, videos iyo playlists. Waxaa gebi ahaanba xor ah oo si sahlan loo isticmaali. Isku day inaad ka soo.
# 5. TubeBox
Tubebox waa ciyaaryahan qumman iyo tababare YouTube videos iyo playlists. Waxay leedahay fursado ah ee hab loo maqli karo iyo music play in tayo sare leh.
# 6. Music Player
Music Player ciyaara music maxalliga ah iyo sidoo kale music ka YouTube. Raadi maalin kasta heeso cusub iyo iyaga qulquli on YouTube la dhibaatana ma leh.
# 7. YouTube Music
Dhegayso wax kasta YouTube music aad rabto iyo xitaa waxaad dooran kartaa tayada video sida aad want.What ka badan, waxa uu leeyahay 300 gooldhalinta hogaanka si aad tixraac.
# 8. MusixTube
MusixTube, ciyaaryahanka music kama dambaysta ah YouTube u Android, kuu soo music cusub ka maalin kasta YouTube oo aad dooran kartaa qaabka loo maqli karo oo kala duwan si loo xoojiyo aad waayo-aragnimo music.
# 9. Video Tube
Video Tube waa accompanion weyn YouTube, taas oo aad awood u tahay in la helo music cusub ka maalin kasta YouTube. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa playlist oo dhigay hab loo maqli karo kala duwan.
# 10. Tube Smart
SmartTube ma ciyaari kaliya music laakiin sidoo kale videos YouTube ka Dailymotion iyo vimeo. Samee playlists ka music aad jeceshahay oo wuxuu ku raaxaysan.
YouTube Music Apps ee macruufka
Sida YouTube app rasmiga ah ee macruufka, waxa aad caawisaa si ay u baadhaan videos inuu u ciyaaro, oo ay ku jiraan videos music. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad ku soo wareegto markaana ay u helaan ka Watch Later playlist.
# 2. MB: YouTube ciyaaryahan music edition 2
Play music YouTube aan kala joogsi lahayn la app this. Oo weliba waxay sheegtay in ay taageeraan Lugood iyo Spotify ee way.And isla app this gebi ahaanba waa bilaash ah.
# 3. Waa
Musi kuu ogolaanaya in aad si toos ah uga sii qulquli music YouTube on qalabka macruufka aad. Xitaa haddii aad screen off, xakamayn karto loo maqli karo la screen qufulka.
# 4. FoxTuber Bilaashka ah ee macruufka 7
FoxTuber Bilaashka ah ee macruufka 7 siinayaa waayo-aragnimo music ugu jilicsan la muuqaalada baadhi karo, loo maqli breakpoint celi loo maqli karo.
# 5. Tuner u YouTube Music
Tuner music YouTube waxaa si gaar ah loogu tala galay aad waayo-aragnimo music. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad la abuuro playlists iyo muusiko dhegayso, loop.
# 6. Music Tubee
Music Tubee bixisaa hogaanka gooldhalinta 100 heeso ka 38 dal la YouTube videos. Waxaad ka ciyaari kara music ee hab oo kala duwan iyo sidoo kale la abuuro playlists YouTube.
# 7. Jasmine
Jasmine bixisaa badan oo muuqaalada dheeraad ah ka badan kuwa kale, sida hab habeenkii, airplay, celiska joojiyaan-dhibic iyo wax ka badan. All oo dhan, waxaa qiimo leh oo aad isku day.
# Sideedaad Waxa uu hogaaminayo
Vodio weaves videos ilo kala duwan oo ay ka mid yihiin YouTube ay qaybaha kala duwan sida ugu caansan, madadaalo iyo wax ka badan.
# 9. iTube
iTube waa isku-dar ah u qummanaado YouTube, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si ay u xakameeyaan YouTube music loo maqli karo la headphone iyo bixisaa Raaxo ugu fiican.
# 10. YouPlayer
YouPlayer u ogolaanaya loo maqli karo asalka iyo in aad ku soo wareegto si ay u helaan YouTube library.You xitaa isticmaali kartaa codka si loo xakameeyo app this.
3 Talo si aad u hesho Star Wars Ringtones
> Resource > Apps > YouTube Music Apps in caawi Dhegayso YouTube la Screen off